Parenting - Fizarana 5
Fampandrosoana lahateny ho an'ny ankizy - inona ary amin'ny firy taona tokony hitenenan'ny zaza. Raha miteny ratsy ny ankizy - ahoana no handresena ny fahatarana amin'ny fampandrosoana ny teny.
Ny famatoran-keloky ny zanaky ny mpifanolobodirindrina dia matetika mahatonga ny reny sasany ho tsapan'ny fitsiriritana sy ny tebiteby, satria ny zana-badiny dia zara raha mahafeno ireo teny voalohany ary tsy maika ny hiresadresaka amin'ny ray aman-dreniny. Angamba misy zavatra tsy mety amin'ny zaza ary fotoana hifandraisana amin'ny mpitsabo iray? Raha ny marina, ny ankizy tsirairay dia samy manana ny maha-izy azy ary mihalehibe tanteraka.
Fampandrosoana lahateny ho an'ny ankizy - inona ary amin'ny firy taona tokony hitenenan'ny zaza. Raha miteny ratsy ny ankizy - ahoana no handresena ny fahatarana amin'ny fampandrosoana ny teny. Read full »
Ny zaza nalemy dia aretina na tsy fankatoavana. Inona no tokony hataonao raha hitanao fa nanjary natahotra ny zanakao?
Ny kisendrasendra, ny tsy fankatoavana ary ny aretin'ny neuroses - inona no tonga aloha ary inona no vokany? Ny reny sasany dia mihevitra fa ny hatezeran'ny hatezerana amin'ny zanany dia fanehoana ny fikorontanan'ny rafi-pitabatabana, saingy mitranga ny lalana hafa - ny fikikisana tsy manam-pahataperana sy ny fihetsika tsy mendrika dia mitarika ny fisian'ny neuroses amin'ny fahazazana. Ny zaza nateraky ny aretina - aretina na tsy fankatoavana. Ny fahasosoran'ny ankizy dia mifandraika amin'ny fihoaram-pefy eo amin'ny fitondran-tenany - nihamaro ...
Ny zaza nalemy dia aretina na tsy fankatoavana. Inona no tokony hataonao raha hitanao fa nanjary natahotra ny zanakao? Read full »
Tsy te hiditra any amin'ny kindergarten ilay zaza: vazivazy mahatsiravina! Ahoana ny fomba hanampiana ireo ray aman-dreny sy zaza tsy te hiditra ao amin'ny kindergarten
Ny ankizy tonga lafatra dia madio foana, tsara fanahy ary mahafatifaty, mitsiky izy, mahavita manatanteraka ny baikonao rehetra ary mamaly amin'ny zava-drehetra: "Eny, amin'ny fifaliana, tiako be ianao ry Mama." Tsy misy ankizy toy ny olon-dehibe, na izany aza. Ny zaza tena izy dia mety tsy ampy torimaso, lasa malemy, tezitra, matahotra ary farany, mandà tsy hiara-miasa aminao, mamaly ny soso-kevitra rehetra:
Tsy te hiditra any amin'ny kindergarten ilay zaza: vazivazy mahatsiravina! Ahoana ny fomba hanampiana ireo ray aman-dreny sy zaza tsy te hiditra ao amin'ny kindergarten Read full »
← Teo aloha 1 ... 4 5